ဘဝမှတ်တိုင်: November 2015
Samsung Galaxy S3 (International) (GT-I9300) Full Flash Firmware
Samsung Galaxy S3 အတွက် File အစုံပါတဲ့ Firmware လေးပါ။Android Version 4.3 ဖြစ်ပါတယ်။
တင်ရမဲ့ Tool ကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Odin ကနေပဲတင်ရမှာပါ။
အောက်က Link ကနေ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
PDA – XXUGMK6
Modem – XXUGMK6
Android Version – 4.3
Region – OXA
File Size – 813.11 MB
Download Link – Mediafire
Credit : www.mm-mpxteam.net
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/30/2015 06:04:00 pm0comments
ဤ tool က Samsung Device များ Service များအတွက် အလွန်အသုံးတည့်လှသည်။
Firmware တစ်ခုလုံးအထိ backup ထုတ်နိုင်သည်။ တစ်ခုစီသော img များကို backup ထုတ်နိုင်သည်။
imei များ backup ထုတ်နိုင်သည်။ စသဖြင့် ဥာဏ်ရှိသလို စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အပြည့်အစုံကို ပုံနှင့်တကွ ဒေါင်းနိုင်ပါသည်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/30/2015 06:02:00 pm0comments
VIVO X3S Root
VIVO X3S က V-root တို့ I-Root တို့လို One Click Root တွေနဲ့မပေါက်ပါဘူး
မြန်မာစာ Built-in ပါပေမယ့်Root သုံးချင်တယ့် ကိုကိုတွေ (အများအားဖြင့် COC သမားဒေ ပေါ့ဗျာ)။
အတွက်ပေါ့ဗျာ Buildnumber PD1227BW-A-2.5.1 ပဲရမှာပါ
နည်းနည်းလောသွားတယ်ဗျာ Sorry အရင်ဆွဲပြီးသားအစ်ကိုတွေပြန်ဆွဲရမှာပါ
အခုထပ်တင်ပေးထားတယ့် ဖိုင်အသစ်မှာ Boot နှစ်ခုပါတယ်ဗျ Root ဆိုတဲ့ Boot.img ကိုအရင် Fastboot ကနေ
Flash ပါ တက်လာရင် V-Root နဲ့ Root ပြီး Root ပေါက်သွားပြီးရင် X3s.img ကို Fastboot ကနေပြန် Flash
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/30/2015 06:00:00 pm 1 comments
step2fail ဆိုတဲ့ Error ကို Fix လုပ်ဖို့tool
Monday, November 30, 2015 Min Oke Kar No comments
huawei ဖုန်းတော်တော်များများ Firmware တင်တဲ့အခါ
ကြုံရတတ်တဲ့ step2fail ဆိုတဲ့ Error ကို Fix လုပ်ဖို့
ထွက်တာ ကြာပီဆိုပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်
ပျက်သွားတဲ့သူများ လိုချင်တဲ့သူများတော့ ရှီမှာပါ..
Huawei ဖုန်းတော်တော်များများလို့ ပြောပေမယ့်
သေချာရတဲ့ ဖုန်းများကတော G520-500,C8825D,U8825D,T9200,
စတဲ့ ဖုန်းတွေကတော့ သေချာပေါက် Step3Fail error ကို Fix လုပ်နိုင်မှာပါ...
Credit >>> Myo Ko Ko Zaw (Developer)
Download >>> https://usersfiles.com/zzbhsdxs0d6h
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/30/2015 05:58:00 pm 1 comments
Samsung ဖုန်းတော်တော်များများ ဖုန်းမှာတင် root လုပ်နိုင်တဲ့ King Root 4.6.0 (last)
ကဲ Samsung ဖုန်းသမားများ ကွန်ပျူတာ မရှိလို့
ကို့ဖုန်းကို root မရလို့စိတ်ပျက်နေတာလား လာပါပီ မင်းသား.
King Root ရဲ့နောက်ဆုံး vir 4.6.0လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
J7နဲ့ ဖောက်ရအလွန်ခက်တဲ့ S3 Nero တောင် ပေါက်ပါတယ်
စမ်းပီးသားပါ ..J5လည်းပေါက်သွားပါတယ်လို့ မနေ့က
chat box မှာလာပြောပါတယ် ကဲ စမ်းသုံးကြည့်ကြပါ 5.1.1 ထိ
ပေါက်ပါတယ် တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် root ဖောက်တုန်း
Download King Root 4.6.0
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/30/2015 05:48:00 pm0comments
ဖုန်းထဲမှာ စာအုပ်ဖတ်ရူရန် လို့အပ်တဲ့ - Adobe Acrobat Reader v15.3 APK နောက်ဆုံး Version
Android ဖုန်း အတွက် Adobe Reader တောင်းဆိုထားတဲ့ All Friend အတွက်ကျနော်တင်ပေးလိုက်
ပါတယ်။ Adobe Reader ကိုAndroid ဖုန်း Tablet တွေမှာ အဖြစ်နိုင်ဆုံးဆောင်ထားသင့်တဲ့ Adobe Acrobat apk လေးနောက်ဆုံးထွက်ပါ။ စာအုပ်တွေဖတ်ရန် အလို့အပ်ဆုံး Android OS အတွက် Reader လေးဖြစ်ပါတယ်။ Adobe Acrobat or PDFအစရှိသော ဖိုင်တွေကို ဒီ ကောင်းလေး နဲ့ဖတ်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ အသုံးပြုလို့သူများ အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/19/2015 05:09:00 pm0comments
♪ Android OS 5.1 အထက် Root ဖောက်နိုင်တဲ့ (One Click) - Kingroot v.4.6.0.Apk (15-Nov) ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Root Tool လေးကတော့ ဖုန်းထဲမှာတင်ပဲ Root လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Apk လေးဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။ မနေ့ကမှ (15-Nov) အသစ်ထွက်လာတဲ့ Version လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဟန်းဆက်ပေါင်းများစွာ ကို Click တစ်ချက်ထဲနဲ့ Root ဖောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဗျာ။ အခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Android OS 5.1 အထိ Root ပေါက်တယ် လို့သူ့ရဲ့မူရင်း Website မှာဖော်ပြထားပါတယ် ဗျာ။ ပြည်ပဆိုဒ်တွေကိုမွှေနှောက်ရာမှာလည်း Error ကင်း ကင်းနဲ့ Root ဖောက်နိုင်တယ် လို့ဖော်ပြ ထားပါတယ်ဗျာ။ ဖုန်းကလိချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများနဲ့ Service လုပ် တဲ့ဘော်ဒါများ လိုအပ်ရင်ဒေါင်းယူ သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖုန်းထဲမှာ Root ဖောက်နိုင်တဲ့ Apk အပြင် Computer နဲ့ချိတ်ပြီး Root ဖောက်ချင်သူများအတွက်လည်း EXE ကိုပါတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Download For Phone (Apk)
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/18/2015 05:35:00 am0comments
ဒီနေ့ တော့ ဦးလေးကြီးတင်ပေးမှာကတော့ OPPO R1001 Firmwareတင်နည်းလေးတင်ပေးမှာ
ဖြစ်ပါတယ် Postမတင်တာကြာလို့ လားမသိဘူး ဘယ်လိုတင်ရမလဲတောင်းမသိတော့
ဦးလေးကြီးလည်းမအားတာကြောင့်postမတင်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ် အားတဲ့ အချိန်တိုင်း
ဦးအာကာUserများကိုမမေ့ပါဘူး ဦးလေးကြီးအားတဲ့အချိန်တိုင်းpostတင်ပေးပါမယ် ကဲလေကြောမရှည်တော့ဘူးစလိုက်ရအောင်
ကဲလိုအပ်တဲ့OPPO R1001 Firmwareလေးအောက်မှာအရင်downယူလိုက်ပါ
free Downloads link OPPO R1001 Firmware
ဦးအာကာ facebook ဦးအာကာ-အမေး-အဖြေ groupထဲ
Join Groupလုပ်ပေးပါအုံး (အောက်ကစာသားပေါ်သို့ နှိပ်ပြီးသွားပါ)
Firmware downယူပြီးပါက SD Card ထဲသို့မိမိတို့Downယူလိုရရှိတဲ့Zipဖိုင်းလေးကို Copyကူးထည့်လိုက်ပါ ဖုန်းထဲသို့SD Card ကိုထည့်လိုက်ပါ
ပြီးပါက (Recovery mode)၀င်ရန် Volume Down+Power Keyရယ် နှစ်ခုကိုပြိုင်တူနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ
Recovery modeထဲသို့ ရောက်ပါက Language ရွေးခိုင်ပါလိမ့်မယ်
သင့်နှစ်သက်တဲ့ Language ရွေးပေးလိုက်ပါ ဦးလေးကြီးကတော့
English့ Language ရွေးပေးလိုက်ပါတယ်
တွေ့ ရပါလိမ့် မယ် မိမိက SD card နဲ့ Firmwareတင်မှာဆိုတော့ Install From SD ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ပြီးပါက From mobile phone storage နဲ့From SD ကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ်
မိမိက From SD ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
မိမိတို့SD Card ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ Firmware zip ကို ရွေးပေးပြီးflashလိုက်ပါ
Installation package ,this operation can not be restored(ခုFirmwareတင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြန်လှန်သိမ်းဆည်းလိုမရပါဘူး ရှိသမျှ Dataအကုန်ပြတ်ပါလိမ့်မယ်)
ပေးထားလိုက်ပါမယ် မိတ်ဆွေတို့ က Firmwareတင်ရန်အတွက် YES ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ
Updating please wait (version မြင့်နေတဲ့ အချိန်မှာခဏစောင့်ပေးပါ)
Installation Successful (သင့်လုပ်ချက်အောင်မြင်သွားပါပြီး)
Reboot AND YES
ပေးထားပါလိမ့်မယ် Reboot ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ပါဝါပိတ်ပြီး ပါဝါပြန်တတ်လာရင် သင့်အေးဆေးစွာ အသုံးပြုလိုရပါပြီး
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/18/2015 12:17:00 am6comments
ဖုန်းတွေထဲကို Virus မ၀င်ဖို့နဲ့ဖုန်းရဲ့လုံခြုံစေမယ် - AntiVirus PRO Android Security v5.0 APK
ဖုန်းတွေထဲကိုVirusမ၀င်ဖို့နဲ့ဖုန်းရဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းကိုအပြည့်အ၀ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်Mobile application ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Androidဖုန်း/Tablet ထဲကို Virus , Malware, Spyware စတာတွေဝင်မလာအောင်အချိန်ပြည့်စစ်ဆေးပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမှာသွင်းထားတဲ့ အခြားဆော့ဝဲတွေမှာ virus ပါမပါကိုလည်းစစ်ဆေးပေးပါတယ်။ ဖုန်း/Tablet နဲ့အင်တာနက်ကြည့်ရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ data တွေခိုးယူခံရခြင်းမရှိဖို့လည်း Mobile Antivirus Security Pro ကကာကွယ်ပေးနိင်ပါသေးတယ်။ Blacklist features လည်းပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်မ၀င်စေချင်တဲ့ ဖုန်း call , SMS စတာတွေကိုလည်း Block ထားနိုင်ဦးမှာပါ။ ဖုန်းထဲမှာသွင်းထားတဲ့ဆော့ဝဲတစ်ခုချင်းစီအလိုက် Password ပေးထားနိုင်တဲ့ function လည်းပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ့်ဖုန်းကို သူများလာကိုင်တဲ့အခါ အသုံးမပြုစေချင် ၊ မကြည့်ရှုစေချင်တဲ့ function များကိုလည်း Lock ချထားနိုင်ဦးမှာပါ။ဒါအပြင်ဖုန်းအတွက်ပေါ့ပါးစေမယ့် task killer,cache cleaner လိုမျိုးတွေလည်းပါဝင်တာကြောင့် တော်တော်လေးကိုလန်းတဲ့ Mobile Security ဆော့ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Android O/S 1.6 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/18/2015 12:13:00 am0comments
Rooting Lenovo K3 Note (K50-t5) (Install CWM and Root)
ဟိုနေ့ကမှ တွေ့လိုက်တယ် ..
K3 Note K50-t5 ကို Root လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါဆိုလို့
ကဲလို အပ်တာတွေ အရင်ဒေါင်းထားပါ..
Lenovo USB Driver + PDA net
ဒါကိုတော့ ဖုန်းမှာ Install လုပ်ထားပါ..လိုအပ်လို့ပါ
ဒါကတော့ အဓိက Main ဖိုင်ပါ CWM သွင်းမယ့် ဖိုင်ပါ..
ADB and Fastboot Cwm-K3 Note-Gizdev.com.zip
Update Super SU
CWM သွင်းနည်းခုနက ဒေါင်းထားတဲ့အထဲက ADB and Fastboot Cwm-K3 Note-Gizdev.com.zip
ဖိုင်ကို Zip ဖြည်လိုက်ပါ...ဖြည်ချလို့ ရလာတဲ့ဖိုင်ထဲက Py_cmd.Exe ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ..
ကဲ အောက်က Code လေးတွေ ရိုက်ထည့်ပါ..
ပီးရင် ဖုန်းနဲ့ attached ဖြစ်ဖြစ်စစ်ပါ..attached ဖြစ်ရင်တော့
အောက်က Code လေးကို ထပ်ရိုက်ပါ...
Reboot ကျသွားအောင် အောက်က Code နောက်ထပ် ရိုက်ပါ..
ခဏလေးစောင့်ပါ Fastboot Mode ရောက်ရင်
CWM သွင်းဖို့ ဒီ Code လေး ရိုက်ထည့်ပေးပါ..
Reboot ကျပီးလို့ ပြန်တက်လာရင် CWM သွင်းတာ အောင်မြင်ပါပီ...
ဒါကတော့ CWM သွင်းပီးမှ Rootလုပ်လို့ရမယ့် နည်းပါ..
ခုနက အပေါ်မှာ ဒေါင်းထားတဲ့အထဲက Update SuperSUကို
SD ကဒ်အလွတ်မှာ ထည့်ပီးဖုန်းထဲထည့်ပါ..
ဖုန်းကို Power ပိတ်ပါ...
ပီးရင် Vol Down+Vol Up +Power ကို ဖိနှိပ်ထားပေးပါ.
Recovery Mode ထဲရောက်ပါက install From zip ကိုရွေးပါ..
Install from zip file ကို ရွေးပေးပါ..
ပီးရင် ခုနက SD ကဒ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ SuperSU zip file
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ပေးပါ.. ဖုန်း Reboot ကျသွားမှ Root ဖောက်ခြင်း
>> Min Oke Kar << FB
အိုင်ဖုန်းတွေကိုင်တော့မယ်ဆို ဒီဟာတွေ မသိမဖြစ် မောင်(စွယ်စုံကျမ်း)'s photo. မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) iPhone_iPad ဆိုင်ရာ အိုင်ဖုန်းတွေကိုင်တော့မယ်ဆို ဒီဟာတွေ မသိမဖြစ်ကို သိထား လေ့လာထားရပါမယ်။ မြန်မာစာထည့်နည်း-Jail Break လုပ်နည်းကနေ ဖုန်းကို ဘယ်လိုသုံးရမယ် ဘယ်လိုဝယ်ရမယ်။ ဖုန်းအတုအစစ်ခွဲတာကစပြီး အသေးစိတ် လေ့လာ ဖတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေမေးခဲ့ရင် ဖြေနိုင်ဖို့Share ထားပါ လေ့လာထားပါ ။ နည်းလမ်းတွေ သိမ်းထားပါ သိချင်ရင် အောက်က ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ အတူ Link တွေ တွဲပေးထားပါတယ် နှိပ်ပြီးဖတ်ပါ။ ios-7အထက် အိုင်ဖုန်းမှာ မြန်မာစာနဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် မှန်ကန်စွာသွင်းယူနည်း http://www.mssk.info/search/label/i-Phone%20မြန်မာစာထည့်နည်း ========================================= i-Phone နှင့် i-Pad သုံး၍ Apple ID - i_Tunes အကောင့် အလွယ်ပြုလုပ်နည်း http://www.mssk.info/…/Apple%20%28%20iTunes%20%29ID%20ဖွင့်… ========================================= iPhone ၀ယ်မကိုင်မီ သတိထားရမည့်အကြောင်းအရာများနဲ့ သိထားရမည့် ဗဟုသုတများ http://www.mssk.info/search/…/i-Phone%20အတုအစစ်%20စစ်ဆေးနည်း ========================================== iPhone စတင်အသုံးပြုသောသူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%9… ========================================== iPhone_iPad သမားများ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Cydia အသုံးပြုနည်း အကြောင်း http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%A… ==================================================== i-Phone နှင့် i-Pad သုံး၍ Apple ID - i_Tunes အကောင့် အလွယ်ပြုလုပ်နည်း http://www.mssk.info/…/Apple%20%28%20iTunes%20%29ID%20%E1%8… ========================================= iphone-ipad-ipod JailBreaking ပြုလုပ်နည်း-Unlocking -အသုံးပြုနည်း http://www.mssk.info/…/Jailbreak%20%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80… ======================================= iPhone (ios) ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြု နည်းလမ်းညွှန် http://www.mssk.info/…/IOS%20%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1… ============================================== i-Phone အတုအစစ် စစ်ဆေးနည်း http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%A… ================================================ i-Phone Reset ပြုလုပ်နည်း http://www.mssk.info/…/i-Phone%20Reset%20%E1%80%BB%E1%80%95… =============================================== i-Phone ကနေDownload ယူနည်း http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%9… ================================================= i-Phone (ios) များ Version မြင့်နည်း http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%28ios%29%20%E1%80%99%E1%8… ==================================================== i-Phone ကနေ Wifi ထပ်ဆင့်လွှင့်နည်း http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%9… ===================================================== i-Phone မှာ Backup ယူနည်း http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%A… ================================================= i-Phone အတွက် PhotoShop ဆော့ဝဲ http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%B… =================================================== i-Phone အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန် http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%B… =============================================== i-Phone အတွက် အဘိဓာန် http://www.mssk.info/…/i-Phone%20%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%B… ===================================================== iPhone Carrier နာမည်ပြောင်းနည်း http://www.mssk.info/…/iPhone%20Carrier%20%E1%80%94%E1%80%A… ================================================= Phone Safari ကနေ ၀က်ဆိုဒ်တွေကြည့်တဲ့အခါ မြန်မာလိုမမြင်ရရင်ပြုလုပ်နည်း http://www.mssk.info/2015/09/iphone-safari.html =================================================== iPhone_iPad များ Firmware ရှာယူရန် နှင့် Jailbreak Tools များ Download ယူရန် http://www.mssk.info/…/iphoneipad-firmware-jailbreak-tools.… =================================================== iPhone_iPad တွေ ဘက်ထရီအကုန်မြန်နေရင် ဖုန်းပူလာရင်ဖြေရှင်းနည်း http://www.mssk.info/2015/09/iphoneipad.html =================================================== iPhone ကိုင်နေသူတိုင်း သိထားရမယ့် လုပ်ဆောင်ချက် (၂၁) ချက် http://www.mssk.info/2015/09/iphone_6.html ===================================================== iPhone_iPad တွေထဲကိုကွန်ပျူတာထဲက MP3-MP4 သီချင်းနှင့် ဓာတ်ပုံသွင်းနည်း http://www.mssk.info/2015/09/iphoneipad-mp3-mp4.html အပေါ်က linkတွေသာ လေ့လာပါ iphoneကို ကျွမ်းကျင်စွာကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ =================================================== iPhone_iPad သူများသုံးပီးသား Second Hand ၀ယ်တော့မယ်ဆို အထူးသတိပြုသင့်သည့်အရာများ http://www.mssk.info/2014/03/iphoneipad-second-hand.html ================================================== ဖုန်းထဲကနေ ဆော့ဝဲကောင်းလိုချင်ရင် အောက်ကလင့်မှာ Mssk.apk နှိပ်ယူ Mssk.apk- https://play.google.com/store/apps/details?id=mssk.new
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/14/2015 07:55:00 pm0comments
1. Download Odin V 3.10.7
Odin V3.10.7 >>> Download
2. Download Samsung Ph Driver
USB >>> Download
Kies >>> Download
3, ကဲ မင်းသားလာပီ J7TWRP >>> Download
4. Root File >> Super SU >> Download
ကဲ အားလုံးပြည့်စုံပီဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး
TWRP install လုပ်ပါ့မယ်..
ခုနက ဒေါင်းထားတဲ့ TWRP ဖိုင် ဖြည်ချလိုက်ပါ..
ကဲ ဒေါင်းထားတဲ့ Odin ကို ဖွင့်ပါ....
AP နေရာမှာ ခုနက ဖြည်ချထားတဲ့ TWRP (.tar)ဖိုင်ကို
ပီးရင် ဖုန်းကို ပါဝါ ပိတ်ပါ..Download Mode ၀င်ပါ..
(Vol Down+Home+Power) နှိပ်ပါ....
Vol Up နောက်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါ..
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုကြိုပီး သတိပေးချင်တာ ..
Recovery မတင်ခင် ဖုန်းInterna. Memory ထဲမှာ ရှိတဲ့
User Data တွေ Backup ယူထားဖို့ ပါ..(ပျက်မှာမို့ပါ)
ကဲဖုန်းကို Download Mod ခေါ်ပီးရင်တော့ PC နဲ့
ကြိုးထိုးပါ.. Odin ရဲ့ ID: Colum မှာ အရောင်တက်လာရင်တော့
Start ကို နှိပ်ပီး တင်လို့ ရပါပီ..
Pass လို့ ပြရင်တော့ ပီးဆုံးပါပီ...
ကဲ Root လုပ်ပါ့မယ်..
ခုနက ဒေါင်းထားတဲ့ Super SU ဖိုင်ကို SD ကဒ်အလွတ်ထဲ
ထည့်ထားပါ.. ပီးရင် SD ကဒ်ကို ဖုန်းထဲထည့်ပါ..
ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ...Recovery Mode ထဲဝင်ပါ..
Never show this screen during boot again
တက်လာရင် ဒီလောက်လေးကို အမှန်ခြစ်ထားပေးပါ
ကဲ ခုနက SD ကဒ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ Super SU File ကို
Install လုပ်ပါ.. ပီးရင်တော့ Root ရပါပီ...
တစ်ခုခု အကြံပေးလိုပါကMy FB Acc
My Reader App
Min Oke Kar (နည်းပညာ).apk
ကျနော်တင်သမျှ Post တွေကို Facebook
Min Oke Kar ဘီးလူးကျွန်းသားလေး နည်းပညာ
page ကို Like လုပ်ထားပေးပါ..
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 11/14/2015 07:48:00 pm 1 comments
Samsung Galaxy S3 (International) (GT-I9300) Full ...
Samsung ဖုန်းတော်တော်များများ ဖုန်းမှာတင် root လုပ...
ဖုန်းထဲမှာ စာအုပ်ဖတ်ရူရန် လို့အပ်တဲ့ - Adobe Acrob...
Rooting Lenovo K3 Note (K50-t5) (Install CWM and R...